पाठ उद्घाटक लागि केटी भेटे केही दिन पहिले
म छु राखिएको संग बाहिर झुन्डिएको छ उनको, तर म जान आवश्यक बाँकी भने म चाहन्थे पार्टी मा रात. म मात्र सुत्थ्यौं तीन घन्टा पहिले रात छ । म मा भाग्यो मा उनको रात समय राम्रो छ । मलाई सोधे जाने उनको मित्र तालिका तर बाटो पनि धेरै बालिका लागि त्यहाँ मलाई संग समय खर्च गर्न उनको छ । व्यक्तिगत, म भने एक घण्टा खर्च संग एक केटी उनको कुरा, त्यसपछि उनको मिल्यो संख्या त र त्यहाँ वा पछि रात मा, म पाठ उनको कुरा हामी दुवै मा साझा घण्टा, एक मजाक, एक टिप्पणी बारेमा केही समुद्र तट मा, आदि. छोड ‘अरे, तपाईं कसरी हो।’. कसरी त्यो छ । को लागि पहिलो पाठ प्रयोग, ‘अरे के गरेको । या ‘अरे तपाईं कसरी हो । सबै समय छ । भने त्यो सम्झना छैन, तपाईं बताउन एक मूर्ख कथा, बताउन छैन, एक मजाक छैन प्रयास गर्न प्यारा ।, प्रतिक्रिया ती. त्यो छ वा छैन, तपाईं छौं बस दिने उनको केहि प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न, निष्क्रिय चिट-च्याट जा (यहाँ तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ मान्छे संग, मूंछें समुद्र तट मा), त तपाईं निर्माण गर्न सक्छन् कि न्यूनतम राशि को सान्त्वना मा उनको छ । कटौती छोटो प्रतिक्रिया, त्यसपछि यो सुरु अर्को दिन माथि, र उनको बाहिर सोध्न, आदर्श लागि त्यो रात प्राप्त गर्न बनाउन उनको एक आवेग निर्णय । सबै माथि: यो राख्न सरल छ । के तपाईं मान्छे पालन सल्लाह खोल्नको लागि बालिका पहिलो समय को घन्टा बीच आठ र नौ बजे पक्का तिनीहरूले सबैभन्दा संभावना छन् व्यस्त छ । मलाई थाहा छ यो भन्दै बिना जान्छ तर पछि मलाई थाहा छैन कसरी राम्रो तपाईं हो टेक्स्ट खेल छ, म साझेदारी छौँ. जब तपाईं पाठ उनको सरल अरे के हो, माथि वा जे बस सुनिश्चित बनाउन तपाईं उनको लागि प्रतीक्षा प्रतिक्रिया गर्न पहिलो किनभने केही उत्तेजित गर्दछ एक केटी बन्द भन्दा छिटो तपाईं पाठ उनको अघि दुई पटक त्यो फिर्ता पदहरू भने त्यो लिएर पनि लामो हा-हा । पनि प्रयास प्रतीक्षा कम्तिमा — मिनेट पछि त्यो पदहरू तपाईं पाठ उनको फिर्ता बस त त्यो थाह, तपाईं बकवास गर्छन् र त्यो छैन कि महत्त्वपूर्ण छ । मलाई थाहा छ यो भन्दै बिना जान्छ तर पछि मलाई थाहा छैन कसरी राम्रो तपाईं हो टेक्स्ट खेल छ, म साझेदारी छौँ. जब तपाईं पाठ उनको सरल अरे के हो, माथि वा जे बस सुनिश्चित बनाउन तपाईं उनको लागि प्रतीक्षा गर्न प्रतिक्रिया पहिलो कारण हा-हा । पनि प्रयास प्रतीक्षा कम्तिमा — मिनेट पछि त्यो पदहरू तपाईं पाठ उनको फिर्ता बस त त्यो थाह, तपाईं बकवास गर्छन् र त्यो छैन कि महत्त्वपूर्ण छ । लागि रूपमा प्रतीक्षा — मिनेट, म प्रयास गर्न दर्पण कसरी लामो त्यो लिए । त्यसैले, यदि त्यो लिए एक घण्टा फिर्ता प्राप्त गर्न मलाई, म लिन एक घण्टा र परिवर्तन गर्न प्राप्त फिर्ता उनको छ । सामान्यतया यो हुन्छ उनको सुरु गर्न प्रतिक्रिया छिटो, र त्यसपछि म लिन्छु पाँच मिनेट नभएसम्म, बैठक । पनि फेंक मा विस्तार विराम बीच. कहिलेकाहीं जानिजानि, र अन्य समयमा संसारको यो हुनुपर्छ रूपमा, र म अधिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू गडबड वरिपरि । म छु रूपमा एकल रूपमा तपाईं हुन सक्छ क्षण मा. म बिताए मेरो सम्पूर्ण वसन्त ब्रेक मा बाजा क्यालिफोर्निया, मेक्सिको, र गए अन्तिम सप्ताह पनि छ । त्यसैले, म अन्त मा मेरो मेक्सिको साहसिक संग तीन र को टन. यो एक धेरै सजिलो को लागि मलाई दिन खेल तल, त्यहाँ त सान डिएगो केही कारण लागि. यो मलाई बनाउँछ भन्ने महसुस म मा गरिएको छ सान डिएगो पनि लामो र आवश्यक कदम दूर एक पटक म स्नातक । सबै उनको पदहरू पठाइयो एक मिनेट भित्र सम्म अन्तिम एक । त्यसैले, त्यो गर्न सक्दैन भन्ने योजना टाढा अग्रिम र आशा दिन्छ मलाई एक प्रतिक्रिया छ । म साँच्चै परवाह छैन के को नतिजा छ । म मा पाठ पालन संग अमेरिकी बालिका र मलाई थाहा छ म मा काम गर्न आवश्यक.
राम्रो सुरुवात । आफैलाई, म पनि छैन जस्तै सहित मेरो नाम मा प्रारम्भिक पाठ या त, म आशा छ त्यो नै मेरो मुक्ति, तर छैन भने, त्यो सोध्न छौँ आफ्नो नाम जबसम्म त्यो कुनै चासो छ. म रुचि छैन प्लान कुरा हो, तर म रह्यो जाने कि साँच्चै खराब अघि जब म इन्कार, त्यसैले तपाईं शायद सही छनौट गरे. म के जस्तै तपाईं कसरी राखिएको कुराहरू, तर म तिमीलाई विचार गरे दुई ठूलो गल्ती यहाँ । पहिलो, तपाईं उनको बाहिर सोधे पनि चाँडै । म प्रतीक्षा गर्न मन पराउँछन् एक दिन, प्रयास र कूटवेश भन्ने तथ्यलाई छ, म सिर्फ प्राप्त गर्न प्रयास मा उनको प्यान्ट । दोस्रो, तपाईं उनको बाहिर सोधे मा एक सप्ताह छ । सामान्यतया खराब एक पहिलो तारीख लागि. को लागि जा एक दिन घटना थियो स्मार्ट यद्यपि, जा को सट्टा केहि को लागि एक सप्ताह मा रात. जब त्यो भने, ‘नहीं. अझै हा-हा के तपाईं बारेमा छ । म चाहन्छु, छ शायद केहि पागल जस्तै, ‘जा भेगास, घन्टा को जंगली.
तपाईं प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् भेगास जस्तै केहि संग एम्स्टर्डम छौं भने तपाईं पहिले नै नजिक भेगास. छैन खराब प्रयास सबै हुनत. पछि त्यो संभावना देखिन्छ प्रतिक्रिया, म चाहन्छु बस कुल्ला पुनरावृत्ति । केही दिन प्रतीक्षा, शायद गोली लागि अर्को सोमबार र अर्को पठाउन ‘माथि के. मुस्ताङको स्याउको भाउ छोईसक्नु बारेमा आफ्नो सप्ताह, त्यो पठाउँछ तुरुन्त त्यसपछि, बस अनियमित रोक्न जवाफ, आदर्श जब त्यो सोध्छन् एक प्रश्न छ । प्रतिक्रिया भन्ने प्रश्न भित्र — घन्टा, र त्यसपछि मा सोधेर बाहिर उनको लागि त्यो रात, वा निम्न. हुन छौँ कि एक मंगलवार वा बुधवार रात भने तपाईं स्कोर राखन छौं. राम्रो किस्मत । खैर त्यो छैन बीस-एक, अझै त विकल्प सीमित छन् बुद्धिमानी नभएसम्म म फिर्ता तल जाने मेक्सिको संग उनको छ । म भएको धेरै पैसा खर्च र हाल को लागि आदेश मा रसद काम गर्न त्यहाँ तल म प्राप्त गर्न छ एक होटल । म मिल्यो मालिश विचार देखि, मेरो साथी. मेरो शैली भएको थियो राख्न यो सरल भोजन संग, तर मेरो मित्र रही गरिएको छ बाटो अधिक गधा त्यसपछि मलाई आजकल त निर्णय गर्न आफ्नो सल्लाह लिन. त्यसैले, तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ भेगास र तपाईं उल्लेख गरेनन् । हा, म सधैं ‘सक्छ’ जाने भेगास गर्न सप्ताह लागि, त्यसैले म भन्न छौँ कुराहरू जस्तै । म रुचाउँछु प्राप्त, ‘उहाँले गम्भीर छ । पाङ्ग्रा मोड मा उनको टाउको । जोगिन प्रयास केहि खाना सम्बन्धित एक पहिलो तारीख लागि, र मसाज कुरा पनि हुन सक्छ व्यक्तिगत लागि एक पहिलो तारीख छ । त्यसपछि फेरि, त्यो बीस त्यसैले आफ्नो विकल्प छन् केहि सीमित छ । त्यो मा प्राप्त गर्न सक्छन् एक, यो छ किन मेरो सीमा छ. जे भए पनि, छैन प्रयास सन्देश फेरि उनको सम्म सोमबार वा मङ्गलबार, र त्यसपछि बस बहाना गर्नु तपाईं कहिल्यै उनको आमन्त्रित बाहिर पहिलो स्थानमा द्वारा फेरि भन्दा शुरू छ । मेरो मित्र मलाई भन्नुभयो अन्तिम रात उहाँले एक सूट मा र आफ्नो प्रारम्भिक मा यात्रा । त्यसैले, म छु तिर्ने डलर दुई सय दुई रात मा एक सूट संग, उहाँलाई एक को आफ्नो बालिका र केटी मित्र । यो सरल पाठ छ, आम सधैं खाएका प्रतिक्रिया, या कम से कम. बिटा छ । तर म केही धेरै मा धेरै ठाउँमा वा माथि मेरो खेल. र यो सधैं काम गर्न सकेको दिन अन्तिम स्विंग छ । म सोच्न किनभने यसको आंशिक चापलूसी तर पात पर्याप्त कोठा लागि आफ्नो सोध्न. खैर म आश्चर्य के यो व्यक्ति सोच छ । पनि अवस्थामा थिए भन्ने पूर्ण छन् । यस बचेराहरू सबै मा एक न्यूनतम छ । प्रतिक्रिया
← ला च्याट ब्राजिल
अनलाइन वेबकैम: मेक्सिको मा वास्तविक समय →